Sekoly ENMG : tranonkala vaovao sy fanolorana ny plateforme E-learning
Tafid itra tanteraka ao anatin’ny Taona arivo fahatelo ankehitriny ny sekoly ka miarahaba ny Mpitsara sy ny Mpirakidraharaha rehetra manerana ny Nosy. Manasa antsika rehetra hitsidika ny tranonkalan’ny sekoly ao @adiresy www.enmg.org.mg . Singanina manokana amin’ny zavatra rehetra hita ao ny fanolorana tsotra ny plateforme E-LEARNING izay efa azontsika rehetra sitrahina ihany koa manomboka izao. Ny sitraka rehetra ho an’ny ekipa mpiara-miasa nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka. Kasaina ho avy tsy ho ela ny concours. Mazotoa mitsiditsidika.
ENAP : Lisitr’ireo mpiadina voatazona sy ireo tsy ho afaka mandray anjara amin’ny fifaninanana
Published Date: 5 mars 2021